युवती बाथरुम भित्र नुहाउँदै थिइन्? भेण्टिलेटरको प्वालबाट यी पुरुषले भिडियो बनाएपछि… – Kavrepati
admin August 17, 2021	रोचक Leaveacomment 98 Views
हाम्रो समाजमा नुहाउने र लुगा फेर्ने काम गर्दा कसैले नदेखुन् भन्ने मान्यता हुन्छ । तर कसैले नुहाई रहेको भिडियो नुहाउनेले थाहै नपाई बनाए के होला? पक्कै उ सजायको भागिदार होला । यस्तै एक घटना भारतमा भएको छ । उत्तर प्रदेशको ग्रेटर नोएडा पश्चिम क्षेत्रको एउटा समाजबाट एउटा अत्यन्तै स्त ब्ध पार्ने घटना सामने आएको छ । यहाँ बस्ने एउटी महिलाले आरोप लगाएकी छिन् कि उनी नुहाउँदै गर्दा छिमेकी छिमेकीले लुकेर उसको भिडियो बनाइदिए । महिलाले पुलिसमा उजुरी गरिसकेपछि आरोपीलाई पक्रियो । उक्त महिलाले आरोप लगाइन् कि छिमेकी गु प्त रूपमा स्काईलाइटबाट भिडियोहरू बनाउँदै थियो ।
Next ‘अन्डा शाकाहारी नै रहेको बिज्ञानको निष्कर्ष’